Gudiga Dugsiga - Dugsiyada Dadweynaha ee Harta Water Area ISD 834
Degmada Dugsiga Dadweynaha ee Stillwater Area waxaa xukuma toddobo xubnood oo Golaha Dugsiga ah. Xubin kasta waxaa loo doortaa guud ahaan waxayna u adeegtaa xilliyo afar sano ah. Doorashooyinka seddex ka dibna afar kursi ayaa la qabtaa labadii sanaba mar.
Dhammaan shirarka Guddiga Dugsiga way u furan yihiin dadweynaha, haddii aan lagu cayimin inuu yahay kulan xiran ama fulineed sida waafaqsan sharciga Minnesota. Kulamada guddiga guud ahaan waxaa la qabtaa Khamiista labaad iyo afaraad bil kasta. Kulamada waxaa lagu qabtaa Dhismaha Oak Park, 6355 Osman Ave. N, Stillwater, MN (haddii aan si kale loo sheegin). Kulamada waxbarashada gudiga iskuulka iyo shirarka kale waxaa sidoo kale loo qorsheyn karaa sanadka loo baahdo.
Toos uga daawo Shirarka Gudiga Iskuulka
Sida loo hadlo
at forum furan
Ogeysiis: Kulamada guddiga ayaa si toos ah uga ciyaari doona kanaalka YouTube markii uu kulanku bilowdo.
Kaaliyaha Maamulka ee Kormeeraha Guud/Guddiga Dugsiga
Baro wax ku saabsan 2021 Levy
Qalabka Shirka Gudiga Dugsiga
Daawo Shirarka Golaha Kaydsan
Kooxaha Shaqada ee Guddiga Dugsiga
Isaga oo la hadlaya Gudiga Dugsiga
Dhammaan macluumaadka guddiga dugsiga ee aad rabto hal meel!
Halkan ka hel ajandayaasha kulanka guddiga, qalabka, daqiiqadaha rasmiga ah, fiidiyowyada iyo qoraallada kulanka. Kaliya guji taariikhda kulanka hoose. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa muuqaalka "Raadinta ereyga" si aad u hesho mawduuc ama ajandaha gaarka ah AMA raadin kartaa "Taariikh Taariikh".
Macluumaadkan waxaa loo tixgeliyaa nuxurka arjiga mana laga yaabo inuu buuxiyo heerarka marin u helka ee WCAG 2.0. Baahida ku xeeran macluumaadkan, Ama agabyada kahor 2019-2020, fadlan kala xiriir Joan Hurley barta hurleyj@stillwaterschools.org .
9/9/21 Kulan Xiran
9/7/21 Kulanka Degdegga ah
9/9/21 Kulanka Ganacsiga
9/23/21 Kulanka Gaarka ah
9/23/21 Kulan Xiran
8/26/21 Kulanka Ganacsiga
8/26/21 Kulankii Shaqada Waa La Joojiyay
8/19/21 Kulan Gaar ah
8/16/21 Kulanka Gaarka ah
8/12/21 Kulanka Shaqada
8/12/21 Kulanka Ganacsiga
8/5/21 Kulanka Shaqada
8/5/21 Kulan Xiran
7/22/21 Fadhiga Shaqada
7/22/21 Fadhiga Xidhan
7/22/21 Kulan Ganacsi
7/14/21 Kalfadhiga Shaqada
7/8/21 Kulan Ganacsi
6/24/21 Fadhiga Shaqada
6/24/21 Kulan Gaar ah
6/10/21 Shirka Gudiga Gaarka ah
6/3/21 Fadhiga Shaqada Gudiga
5/27/21 Fadhiga Xidhan Kadib Kulan Ganacsi
5/27/21 Kulan Ganacsi
5/27/21 Fadhiga Xidhan
5/17/21 Fadhiga Shaqada Gudiga
5/13/21 Fadhiga Barashada Gudiga Dugsiga
5/13/21 Kulan Ganacsi
5/6/21 Kulan Gaar ah
4/22/21 Kulan Ganacsi
4/8/21 Fadhiga Shaqada
4/8/21 Kulan Ganacsi
3/25/21 Fadhiga Shaqada
3/25/21 Fadhiga Xidhan
3/25/21 Kulan Ganacsi
3/11/21 Kalfadhiga Shaqada
3/11/21 Kulan Ganacsi
3/4/21 Fadhiga Xidhan
2/25/21 Kulan Ganacsi
2/25/21 Fadhiga Shaqada
2/23/21 Kulan Gaar ah
2/18/21 Fadhiga Xidhan
2/18/21 Kulan Gaar ah
2/11/21 Fadhiga Xidhan
2/11/21 Kulan Ganacsi
1/26/21 Fadhiga Xidhan
1/26/21 Kulan Gaar ah
1/21/21 Kulan Ganacsi
1/19/21 Kalfadhiga Xidhan
1/12/21 Kulan Gaar ah
1/12/21 Kalfadhiga Shaqada
1/7/21 Kulan Urur
1/7/21 Fadhiga Xidhan
12/23/20 Kulan Gaar ah
12/17/20 Kulan Ganacsi
12/10/20 Kalfadhiga Shaqada
12/3/20 Kulan Ganacsi
12/3/20 Kulan Gaar ah
11/19/20 Kulan Ganacsi
11/13/20 Kulan Gaar ah
11/5/20 Fadhiga Shaqada
11/5/20 Kulan Ganacsi
10/8/20 Fadhiga Shaqada
10/8/20 Kulan Ganacsi
10/1/20 Fadhiga Xidhan
9/24/20 Kulan Ganacsi
9/10/20 Kulan Ganacsi
9/3/20 Fadhiga Xidhan
8/20/20 Fadhiga Xiran (Dacwada)
8/20/20 Kulan Ganacsi
8/20/20 Fadhiga Xidhan (Wadahadalka)
8/14/20 Kulan Gaar ah
8/6/20 Fadhiga Xidhan
8/6/20 Kulan Ganacsi
8/5/20 Kulan Gaar ah
8/3/20 Kulan Gaar ah
7/30/20 Kulan Gaar ah
7/23/20 Kulan Ganacsi
7/21/20 Fadhiga Xidhan
7/13/20 Fadhiga Xidhan
7/13/20 Kulan Gaar ah
7/9/20 Kulan Ganacsi
6/30/20 Kulan Gaar ah
6/25/20 Kulan Ganacsi
6/23/20 Kulan Gaar ah
6/11/20 Fadhiga Xidhan
6/11/20 Kulan Ganacsi
5/14/20 Fadhiga Xidhan
5/14/20 Kulan Ganacsi
4/28/20 Fadhiga Xidhan
4/23/20 Kulan Ganacsi
4/22/20 Fadhiga Shaqada
4/9/20 Fadhiga Xidhan
4/9/20 Kulan Ganacsi
3/19/20 Fadhiga Xidhan
3/19/20 Kulan Ganacsi
3/5/20 Fadhiga Xidhan
3/5/20 Kulan Ganacsi
2/20/20 Fadhiga Shaqada
2/20/20 Kulan Ganacsi
2/13/20 Fadhiga Xidhan
2/6/20 Kulan Ganacsi
2/6/20 Fadhiga Xidhan
1/23/20 Fadhiga Shaqada
1/23/20 Fadhiga Xidhan
1/23/20 Kulan Ganacsi
1/15/20 Kalfadhiga Shaqada
1/9/20 Kulan Urur
12/19/19 Kulan Ganacsi
12/12/19 Kal-fadhiga Shaqada
12/12/19 Kulan Ganacsi
12/10/19 Kal-fadhiga Shaqada
11/21/19 Kulan Ganacsi
11/14/19 Kal-fadhiga Shaqada
11/14/19 Kal-Fadhiga Xidhan
11/14/19 Kulan Ganacsi
11/8/19 Uruurinta Sharci Dejinta
11/7/19 Kalfadhiga Shaqada
10/29/19 Kalfadhiga Shaqada
10/24/19 Kalfadhiga Xidhan (Wadahadalka)
10/24/19 Kulan Ganacsi
10/24/19 Kal-fadhiga Xidhan
10/10/19 Kulan Ganacsi
9/26/19 Kal-fadhiga Xidhan
9/26/19 Kulan Ganacsi
9/19/19 Kalfadhiga Shaqada
9/12/19 Kal-fadhiga Xidhan
8/22/19 Fadhiga Xidhan
8/22/19 Kulan Ganacsi
8/20/19 Kalfadhiga Shaqada
8/8/19 Fadhiga Xidhan
8/8/19 Kulan Ganacsi
7/25/19 Kal-fadhiga Xidhan
7/7/19 Kulan Ganacsi
2021-2022 Fiidiyowyada Guddiga Dugsiga
Fiidiyowyada ayaa lagu keydiyaa YouTube-ka waxaana loo kaydiyaa liiska-xilli-dugsiyeedka. Caawinta raadinta fiidiyowyada kahor sanad dugsiyeedka 2016-2017, fadlan kala xiriir Joan Hurley barta hurleyj@stillwaterschools.org .
Fiidiyowyada Guddiga Dugsiyada 2020-2021
Xubnaha guddiga waxay u adeegaan kooxo shaqo oo kala duwan waxayna u shaqeeyaan sidii xiriiriyeyaasha iskuulada degmada. Eeg Siyaasadda Guddiyada Guddiga Dugsiga 213 .Shirarkan guud ahaan way u furan yihiin dadweynaha, haddii kale si kale loo xusay mooyee. Eeg Jadwalka Kulamada Guddiga Dugsiga ee soo socda taariikhda, waqtiyada iyo goobaha. Qof kasta oo raba inuu ilaaliyo kulanka waa lagu soo dhaweynayaa inuu ka soo qeyb galo. Sidoo kale, xubnaha guddiga marka lagu daro xubnaha Muhiimka ah ee Kooxda Shaqada way xaadiri karaan shirarka; sidaa darteed, kooram ama in kabadan xubnaha guddiga ayaa imaan kara kulamada.
Maaliyadda iyo Hawlgallada
Matt Onken (kursi)
Bev Petrie (kursi)
Annie Porbeni (gudoomiye)
Katie Hockert (kursi)
Kooxda ka shaqeysa Maaliyadda iyo Hawlgallada, oo ay ku jiri doonaan Khasnajiga, waxay la shaqeyn doonaan Kormeeraha guud iyo / ama wakiilka (yada) arrimaha la xiriira dhaqaalaha iyo hawlgallada degmada. Kooxdaan shaqeysa waxay siinayaan la-talin iyo aragti ku saabsan go'aannada maaliyadeed ee degmada ka hor inta aan loo soo bandhigin Guddiga oo dhan.
Taariikhaha Kulanka & Xusuusin
Jadwalka Kulanka 2021 Dib loo eegay
Kooxda shaqada sharci dejintu waa inay lashaqeeyaan Kormeeraha guud iyo / ama wakiilka (yada) arrimaha quseeya sharci dejinta. Kooxdan ayaa u doodi doonta isla markaana kormeeri doonta sharciga saameynaya waxbarashada ardayda waxayna siin doontaa cusbooneysiin ku saabsan dhammaan Guddiga arrimaha khuseeya Degmada.
Kooxda shaqaaluhu waxay la shaqeyn doonaan Kormeeraha guud iyo / ama wakiilka (yada) arrimaha la xiriira shaqaalaha. Kooxdaani waxay bixin doontaa la-talin iyo aragti marka loo eego arrimaha shaqaalaha degmada waxayna wakiil uga noqon doontaa dhammaan Guddiga arrimaha cabashooyinka. Kulamadan guud ahaan uma furna dadweynaha sababo la xiriira xasaasiga wadahadalka.
Kooxda ka shaqeysa Dib-u-eegista Siyaasadda, waxay la shaqeyn doontaa Kormeeraha guud iyo / ama qofka loo igmaday dib-u-eegista siyaasadaha Degmada. Kooxda ayaa ku talin doonta isbeddelada la soo jeediyey ee Guddida oo dhan, si loo tixgeliyo loona oggolaado.
Kulanka Jadwalka 2021
Haddii aad rabto inaad la hadasho guddiga dugsiga, waxaad ku samayn kartaa adigoo ka hadlaya inta lagu jiro Madasha Furan kulan kasta oo guddiga.
Is-qoritaanka Madasha Furan onlayn
Foomka is-qoritaanka waxaa laga heli karaa onleenka 8-da subaxnimo Isniinta ka hor kulanka soo socda wuxuuna dhacayaa Arbacadaas 4-ta galabnimo Foomka waxaa lagu dhejin doonaa mareegahaan inta lagu jiro waqtigaas. Xaddidyada waqtiga awgood, waxaan ku xaddidi doonnaa tirada dadka ku hadla ilaa 15 iyadoo af -haye kasta uu helayo 3 daqiiqo. Haddii aad ka hadashay kulankii ugu dambeeyay, fadlan ka fakar inaad u oggolaato dadka kale inay hortaada soo galaan.
Rajooyinka Madasha Furan
Iskuulka Degmada ee 'Waterwater Area School District' wuxuu soo dhaweynayaa fikradaha muwaadiniinta maadaama kaqeybgalka bulshada uu kobcinayo go'aan qaadashada fiican iyo khibradaha waxbarasho ee ardayda oo dhan. In kasta oo faallooyinka iyo su'aalaha la soo dhaweynayo inta lagu guda jiro Madasha Furan, sharciga ayaa ka mamnuucaya Guddigu inay ka hadlaan walaacyada ku saabsan shakhsiga shaqaalaha ama ardayda ah kulan dadweyne. Waxaan si dhakhso leh u joojin doonnaa dacwadaha haddii shaqaalaha ama arrimaha asturnaanta ardayga la soo qaado waxaanan ku amri doonaa afhayeenka inuu u gudbiyo faallooyinka la xiriira shaqsiyaadka shaqaalaha ama ardayda u xilsaaranaha.
Sababtoo ah waxaan tusaale u qaadaneynaa wadahadalka madaniga ee bulshadeena, dadka hadla waa inay u soo bandhigaan markhaatifurintooda si xushmad leh. Waxyeelidda, dabeecadaha weerarada, xumaanta ama cabashooyinka gaarka ah ee lagu aqoonsado shaqaalaha ama ardayda magacyadooda ama tusmadooda lama oggolaan doono.
Guddigu ma kala tashan doono, ka hadli doono, ama la hadli doonin wada-hadal lala yeesho dadka hadlaya inta lagu guda jiro kulanka furan.
Si kastaba ha ahaatee, Guddiga ayaa laga yaabaa inuu ka codsado maamulka inay dib u eegaan walaaca (yada) la soo bandhigay. Haddii aad rabto inaad ka hesho dabagal guddiga ama maamulka, fadlan hubi inaad ku darto cinwaankaaga emaylka foomka is-qoritaanka.
Kulamada Gudiga Dugsiga ee soo socda
Akhriso inbadan oo kusaabsan Fadhiga xiran
Akhri Waxbadan oo kusaabsan Fadhiga Shaqada
Akhri Waxbadan oo kusaabsan Shirka Gudiga Iskuulka
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Kooxda Shaqada ee Maaliyadda iyo Hawlgallada
Akhriso Waxbadan oo ku saabsan Kooxda Shaqada Guddiga Siyaasadda
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Shirka Dhaqaalaha iyo Hawlgallada
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Shirka Dhaqaalaha iyo Hawlgallada - Waxaa dib loo ballamiyay Agoosto 31, 2021
Oktoobar 7 2021
Oktoobar 11 2021
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Taariikhda Xaddidaadda Shirka
Oktoobar 12 2021
Oktoobar 13 2021
Oktoobar 14 2021
Oktoobar 19 2021
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Kulanka Shaqada
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Kulanka Guddiga Dugsiga oo dib loo dhigay Oktoobar 19, 2021
Oktoobar 21 2021
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Kulanka Shaqada oo loo Bedelay Oktoobar 19, 2021
Oktoobar 23 2021
3 : 15 PM - 4 : 15 PM
Oktoobar 26 2021
Oktoobar 27 2021
Oktoobar 28 2021
Nofeembar 2 2021
Nofeembar 4 2021
Eeg Kalandarka Shirka
LASOO DHAWOOW JAWAABTA SHAQADA SHAQADA
Xubnaha Guddiga Iskuulka
Katie Hockert, Agaasime
Markii ugu horaysay la doortay: 11/2020
Muddada waxay ku egtahay: 12/2024
Matt Onken, Khasnaji
Beverly Petrie, Guddoomiye
Muddada waxay ku egtahay: 12/2022
Annie Porbeni, Karaaniga
Tina Riehle, Agaasime
Markii ugu horaysay la doortay: 11/2018
Alison Sherman, Guddoomiye ku-xigeen
Muddada waxay ku egtahay: 11/2022
Chris Kunze, Agaasime
Markii ugu horreysay ee la doortay: 8/2021
Waqtiga uu dhacayo: 12/2022
Kormeeraha guud Malinda Lansfeldt (ex officio)
Jawaab celinta Bulshada
Guddiyada Golaha Dugsiga
Booska Guddiga Dugsiga
Madasha Murashaxiinta Guddiga Dugsiga 2021
Arbacada, Oktoobar 6, 2021 markay tahay 6:30 pm ee Dooxada Helitaanka Dooxada 15
Wareysi uu kafaalo qaaday Gazette Don Hovland iyo Pete Kelzenberg, oo ah labada murashax ee guddiga dugsiga ee warqadda doorashada November 2 ee Dugsiyada Dadweynaha Aagga Stillwater. Musharixiinta waxaa wada waraysan doona Marguerite “Margot” Rheinberger oo ku sugan istuudiyaha Dooxyada Helitaanka (VAC) ee Stillwater. Kaliya musharixiinta ayaa loo oggolaan doonaa inay ka soo qeyb galaan walaacyada COVID-19. Matt DeBow, oo ah tifaftiraha maareeyaha Wargeyska, ayaa ku qori doona jawaabaha daabacaadda wargeyskeeda.
Barnaamijka waxaa si toos ah looga daawan karaa kanaalka COMCAST Cable 15.
Wareysiga ayaa sidoo kale si toos ah looga daawan doonaa bogga VAC ee YouTube iyo bogga Facebook ee www.vactv.org/live.
Qeyb ka mid ah bixinta waxbarasho tayo sare leh oo la siinayo ardaydeena waxay ka dhigan tahay in adeeg aan caadi aheyn loo fidiyo dhammaan macaamiisheena. Degmo ahaan u heellan cilaaqaadka shaqsiyeed, bixinta khibrad adeeg macmiil oo tayo sare leh ayaa qayb muhiim ah ka ah himiladeenna.
Waxaan garwaaqsan nahay, si kastaba ha noqotee, in waqtiyada qaarkood laga yaabo inaanan la kulmin dhammaan waxyaabaha aad ka filayso. Waan soo dhawaynaynaa ra'yi celintaada, waxaanan kugu dhiirigalineynaa inaad nala soo socodsiiso haddii aad wax tabaneyso. Waxaan ku dadaali doonaa inaan ka jawaabno su'aalahaaga oo aan kula shaqeyno sidii xal macquul ah loogu heli lahaa dhibaatooyinka kasta.
Sida loola shaqeeyo si wax looga qabto tabashooyinka loona xaliyo dhibaatooyinka:
La wadaag waxyaabaha aad ka walwalsan tahay qofka sida tooska ah u khuseeya (sida. Macalinka fasalka, tababaraha / lataliyaha waxqabadka, iwm.). Marar badan walwalku wuxuu ka dhashaa macluumaad khaldan ama isfaham la'aan waxaana lagu xallin karaa fasalka ama heerka dhismaha.
Haddii kulankaas ka dib ay weli jiraan arrin, u soo sheeg waxyaabaha aad ka welwelsan tahay maamulaha dhismaha ama kormeeraha habboon.
Haddii arrini weli taagan tahay, waxaad tabashooyinkaaga u gudbin kartaa kormeeraha guud ama wakiilka maamulka.
Haddii ay weli jirto arrin ka dib lahadlida kormeeraha / wakiilka, waxaad ukeeni kartaa walaacaaga guddiga dugsiga adoo adeegsanaya emayl, taleefan ama shaqsi ahaan inta lagu gudajiro Madal Furan, oo looqabto qayb kamid ah kulanka ganacsiga caadiga ah ee guddiga.
Isagoo la hadlaya guddiga:
Haddii aad rabto inaad la hadasho guddiga dugsiga, waad awoodi kartaa inaad sidaas la hadasho bilowga kulanka guddiga dugsiga inta lagu jiro Madasha Furan. Waad iska soo gali kartaa naftaada oo keliya, ma aha shakhsiyaad kale ama kooxo, iyo shaqsi ahaan uun. Saxeexa warqadda ayaa la heli karaa 30 daqiiqo ka hor iyo ilaa bilowga kulanka. Xaddidnaanta waqtiga awgood, waxaan ku xadidi doonnaa tirada ku hadlayaasha 15 iyadoo afhayeen walba uu helayo saddex daqiiqo. Haddii aad ka hadashay shirkii ugu dambeeyay, fadlan tixgeli inaad u oggolaato kuwa kale inay adiga kaa hor saxeexaan.
In kasta oo faallooyinka iyo su'aalaha la soo dhaweynayo inta lagu guda jiro Madasha Furan, sharciga ayaa ka mamnuucaya Guddigu inay ka hadlaan walaacyada ku saabsan shakhsiga shaqaalaha ama ardayda kulan dadweyne. Waxaan joojineynaa dacwadaha isla markiiba haddii shaqaalaha ama arrimaha asturnaanta ardayga la soo qaado waxaanna ku amreynaa afhayeenka inuu u gudbiyo faallooyinka ku saabsan shaqsiyaadka shaqaalaha ah ama ardayda u gudbiyaha guud.
Guddigu ma kala tashan doono, ka hadli doono, ama la hadli doonin wada-hadal lala yeesho dadka hadlaya inta lagu jiro fagaaraha furan. Hase yeeshe, Guddigu wuxuu maamulka weydiisan karaa inay dib u eegaan cabashooyinka la soo bandhigay.
Guddiga dugsigu wuxuu ka kooban yahay toddobo muwaadin oo ay doorteen codbixiyeyaasha degmada. Xubnaha waxaa loo doortaa muddo afar sano ah oo is dulsaaran, iyadoo doorashooyin la qabanayo labadii sanaba mar. Dhamaadka afarta sano, xubnuhu waxay u tartami karaan dib-u-doorashada shuruudo isku xigxiga. Codbixintu waxay ka dhacdaa doorashooyinka guud ee Noofambar, shuruudaha ayaa bilaabmaya Isniinta ugu horreysa bisha Janaayo intaas ka dib.
Ogeysiisyada Doorashada (oo la cusbooneysiiyay Ogosto 2021)
Hadda aqbalida dhaarta cadaynta musharraxnimada kursiga guddiga dugsiga bannaan
Ogeysiiska Soo Gudbinta Taariikhaha Doorashada Guddiga Dugsiga Madaxa Bannaan ee Degmada 834
Kheyraadka ka socda Ururka Guddiyada Dugsiyada Minnesota:
Ka mid noqoshada Xubnaha Golaha Dugsiga
Halka ay Guddiyada Dugsiyadu ku Bartaan Hogaaminta
Gali cinwaankaaga Goobtaan Goobta Codbixinta si aad uga hesho macluumaadka codbixinta ee muhiimka ah goobtaada.
Si looga codeeyo warqad codbixin maqane ah ama shaqsi ahaan goobta codbixinta ah, shakhsiyaadka u qalma waxay u baahan yihiin in laga diiwaangaliyo cinwaankooda hadda. Cod-bixiyeyaashu waxay iska diiwaangelin karaan inay ka codeeyaan khadka tooska ah iyada oo loo marayo Xafiiska Xoghayaha Gobolka ee Minnasota ee mnvotes.org.
Su'aalaha ku saabsan doorashada guud, codbixinta maqnaanshaha, ama diiwaangelinta cod-bixiyaha waxaa lagu hagaajin karaa Degmada Washington lambarka 651-430-6175. Booqo bogga Codbixinta Maqnaanshaha Gobolka Washington wixii macluumaad dheeraad ah.
Natiijooyinka doorashada ee xaafadda waxaa laga daawan karaa websaydhka Xoghayaha Gobolka Minnesota.
Guddiga dugsigu wuxuu horumariyaa aragtidiisa isagoo diiradda saaraya guusha ardayda, la shaqeynta bulshada, iyo inuu noqdo mid firfircoon wax ka qabashada arrimaha saameeya waxbarashada heerarka maxalliga, gobolka, iyo heer qaran.
Arag Platform Sharci-dejinta 2020-2021
Ururka Guddiyada Dugsiyada MN
Hadafka Ururka Guddiyada Dugsiyada ee Minnesota, hormuudka u ah u doodista waxbarashada dadweynaha, wuxuu taageeraa, dhiirrigeliyaa oo xoojiyaa shaqada guddiyada iskuulka dadweynaha.
MSBA waxaa la aasaasey sanadkii 1920 waana ururka sideedaad ee ugu da'da weyn gudiga iskuulka Mareykanka.
AMSD (Isbahaysiga Degmooyinka Iskuul Magaalo Weyn)
Waa himilada AMSD inay u dooddo degmooyinka iskuulada magaalooyinka waaweyn iyo hormarinta sharciga taageeraya guusha ardayda.
SEE (Dugsiyada Sinnaanta Waxbarashada)
Dhammaan carruurta dhigata dugsiyada dadweynaha waa inay u siman yihiin helitaanka waxbarasho tayo sare leh iyadoon loo eegin meesha ay ku nool yihiin Minnesota.
Xiriiradayada Sharci Dejinta
Gudoomiye Tim Walz
130 Xarunta Gobolka
Wicitaan Bilaash ah: 800-657-3717
1500 Highway 36 Galbeed
Senator Karla Bigham (DFL) Degmada 54
3411 Dhismaha Senate-ka Minnesota
Jaamacadda 95 Ave W
Senator Roger C. Chamberlain (R) Degmada 38
3225 Dhismaha Golaha Guurtida ee Minnesota
Senator Karin Housley (R) Degmada 39
3217 Dhismaha Senate-ka Minnesota
Senator Susan Kent (DFL) Degmada 53
2325 Dhismaha Golaha Guurtida ee Minnesota
Rep. Shelly Christensen (DFL) Degmada 39B
577 Dhismaha Xafiiska Gobolka
Rep. Bob Dettmer (R) Degmada 39A
289 Dhismaha Xafiiska Gobolka
Rep. Tony Jurgens (R) Degmada 54B
351 Dhismaha Xafiiska Gobolka
Rep. Linda Runbeck (R) Degmada 38A
253 Dhismaha Xafiiska Gobolka
Rep. Steve Sandell (DFL) Degmada 53B
521 Dhismaha Xafiiska Gobolka
Rep Ami Wazlawik (DFL) Degmada 38B
565 Dhismaha Xafiiska Gobolka
Wakiilada Gudiga Dugsiga:
Ururka Iskuullada Degmooyinka Metropolitan (AMSD): Alison Sherman
Golaha La -talinta Waxbarashada Bulshada: TBD
Ururka MN ee Dugsiga Sare (MSHSL): Matt Onken
Qorshaha Iskaashiga: Annie Porbeni
Iscasilaadda xubin ka tirsan guddiga Liz Weisberg, ayaa guddigu ansixiyay qaraarro lagu buuxinayo booska bannaan si ku meel gaar ah iyo inta ka harsan muddada. Kursiga wuxuu dhacayaa Janaayo 2, 2023.
Wixii su'aalo ah, kala xiriir Joan hurleyj@stillwaterschools.org ama 651-351-8455.
Guddiga ayaa magacaabaya xubin ku meel gaar ah oo buuxiya booskan ilaa doorashada gaarka ah. Araajida ayaa laga heli doonaa degelkan laga bilaabo duhurnimada Ogosto 13, 2021 illaa Ogosto 18, 2021 saacadda 3pm
Agoosto 13: Codsiyada ku dheji mareegaha
Agoosto 14-18: Aqbal codsiyada
Agoosto 19: Kulan gaar ah oo lagu qaadayo waraysiyo iyo suurtogalnimada in loo codeeyo qofka la magacaabayo
Agoosto 26: Ku magacaw bedelka qaraarka kulanka caadiga ah ee guddiga
Sebtember 25: 30 maalmood oo codsi ah
Qaynuunnada Minnesota qaybta 123B.09, hoosaadka 5b waxay u baahan tahay in jagada Guddiga Dugsiga ee bannaan ay buuxiso ballan Guddiga Dugsiga, ballantaas oo sii socon doonta ilaa qof u qalmo sida hoos timaada Xeerarka Minnesota qaybta 205A.10, hoosaadka 3, sida murashaxa guuleysta doorasho gaar ah oo loo qabtay ujeeddada doorashada shakhsi si loogu adeego qaybta aan dhammaan ee muddada bannaan ee hadda jirta.
Kursiga Hal Sano
Doorasho gaar ah oo ah kursi 1 sano ah ayaa la qaban doonaa Noofambar 2, 2021 si loo buuxiyo booska sababtuna tahay iscasilaadda xubinta guddiga.
Dhaarinta murashaxnimada doorashada gaarka ah ee lagu buuxinayo jagada guddiga waxay bilaaban doontaa 11 -ka Ogosto, 2021 waxayna xirmi doontaa 5 -ta galabnimo ee Ogosto 25, 2021.
Warqadaha cadaynta musharaxnimada ayaa la heli doonaa waxaana lagu xerayn karaa saacadaha shaqada (8 subaxnimo - 4 galabnimo, Isniinta ilaa Jimcaha) Xafiiska Degmada. Caddaynta musharraxnimada waa in lagu xareeyaa Xafiiska Degmada ugu dambayn 5 -ta galabnimo ee Ogosto 25 oo ay la socoto khidmadda gudbinta $ 2 ama codsi ay ku jiraan ugu yaraan 500 saxeex oo cod -bixiyeyaasha u -qalma beddelkii khidmadda xereynta.
Fadlan kala xiriir Joan Hurley cinwaanka hurleyj@stillwaterschools.org ama taleefanka 651-351-8455 si aad u samaysato wakhti aad ku xaraysato dhaartaada musharaxnimo.
Dadka soo gudbiya murashaxnimada Guddiga Dugsiga waxay haystaan ilaa 5 -ta galabnimo Ogosto 27, 2021 si ay u codsadaan in magacooda laga saaro warqadda cod -bixinta; wixii ka dambeeya 27ka Ogosto, magacyada dhammaan musharraxiinta harsan ayaa lagu dari doonaa warqadda codbixinta.
Warqadaha cadaynta musharaxnimada waxaa lagu dhajin doonaa hoosta, si loo xareeyo, marka ay diyaar noqdaan.
Caddeynta Musharaxnimada Kursiga Hal Sano
Warqadaha cadaynta musharaxnimada waxaa lagu dhajin doonaa hoosta markay diyaar noqdaan.
Xiriirinta Guddiga Dugsiga ayaa jirta si dhammaan xubnaha guddiga ay u helaan fursado badan oo ay kula xiriiraan dugsiyadeena sannad dugsiyeedka oo dhan. Xubnaha guddiga ayaa fahamsan muhiimadda ay leedahay in xiriir adag lala yeesho mid kasta oo ka mid ah iskuulada ku yaal degmada, joogitaanka xubnaha guddiga ee iskuuladuna waxay ka caawinaysaa guddiga in ay gaaraan go'aannada ugu fiican ee suurtagalka ah maadaama ay si fiican u fahmayaan baahida ardayda.
Xubnaha Guddiga Dugsiga waxaa loo qoondeyn doonaa laba iskuul / barnaamijyo xilli-dugsiyeedkiiba waxayna u rogi doonaan iskuulada haray. Afar sano ka dib, xubin kasta oo ka tirsan guddiga ayaa isku beddeli doona iskuul kasta. Waxaa la codsaday in ugu yaraan, xubnaha guddiga ay la ballamiyaan booqashada maamulaha isla markaana ay ka soo qayb galaan ugu yaraan hal kulan / dhacdo kale oo simistarka ah.
Xusuusin ku saabsan shaqooyinka xiriirinta:
Maaddaama xubnaha guddiga ay gaaraan dhammaan go'aannada iyaga oo maskaxda ku haya degmada oo dhan, xilalka looma jeedin inay noqdaan xilal u doodid laakiin waxay u oggolaanayaan xubnaha guddiga inay ka helaan aragti ballaadhan degmada.
Xubnaha guddiga dugsigu kuma lug yeeshaan arrimaha maamulka iskuullada gaarka ah laakiin waxay u gudbiyaan welwelka shaqaalaha ku habboon ama kormeeraha guud.
Xubnaha guddiga kuma koobna oo keliya inay ka qaybgalaan munaasabadaha dugsiyadda loo qoondeeyey.
Kuraasta waxay ahaan doonaan kuwo joogto ah marka xubnaha cusub ee guddiga la doorto.
Kala Guurka Buundada (18-21)
Macluumaadka Dhaqaalaha Ololaha
Macluumaadka maaliyadda ee Aftida Hawl -galka Levy ee 2021 ayaa halkan lagu dhajin doonaa marka la helo.
Shabakadda Bulshada Waalidka Dooxada 5.21.2
Ururka Waxbarashada St. Croix (SCEA) 9/9/21
Guddigii Cod -Bixin La’aana
Xogta maaliyadeed ee ololaha Xubnaha Golaha 2020 ayaa halkaan lagu dhajin doonaa markay diyaar noqoto. Si aad u aragto agabyada keydsan ee aan halkan laga heli karin, fadlan la xiriir hurleyj@stillwaterschools.org ama wac 651-351-8455.
Finalka ugu dambeeya 11.30.20
Shahaadada St. Ores
Macluumaadka maaliyadeed ee ololaha Xubnaha Guddiga 2018 ayaa lagu dhajiyay halkan. Si aad u aragto agabyada keydsan ee aan halkaan laga heli karin, fadlan la xiriir hurleyj@stillwaterschools.org ama wac 651-351-8455.